Dearborn 6-12 STEM Academy | Boston School Finder
BPS/Degmada6aad - 12aad
60 Washington Street, Roxbury
Her Gobal: Taageero Balaaran/Iskudhafan
Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad sidoo kale booqan kartaa qaybteena FAQ.
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:25am-2:55pm
Lambarka Taleefanka 617-635-8412
Dhamaan dugsiyada sare ee Boston Public School (BPS) waxay ufuranyihiin arday kasta oo kunool Boston, asago kusoo galaaya diiwaangalin furan, codsi, am imtaxaan laga qaado. Dugsigaani waa mid lagu galo diiwaangalin cidkasta ufuran Dhagsii Batoonka Apply Online si aad uhubiso in diiwaangalin furantahay.
Xiliga Kama danbaysta ah ee Diiwanagalinta Muhiimada lasiinaayo ee fasalka 9aad
Feebaraayo 1, 2019
Xiliga Diiwaangalinta Muhiimka ah ee dhamaan fasalada kale oo dhan
Maarso 22, 2019
Dearborn waxaa dhigta kudhawaad 600 oo arday oo wax kubaran doonta dhisme, cusub oo casri ah oo loogu talagalay STEM. Dugsiga waxaa si maskaxaysan loogu dajiyay waxbarashada ardayda ee qarnigaan 21aad. Waxay jaanis usiinaysa ardayda iyo dadka waawayn inay iskaashadaan iyo – Maadaama uu yahay dugsiga kubaxa maadoodiynka farshaxanka ee STEM – wuxu leeyahay adeegsiga tignoloojiyad aad tayadeedu usarayso.
• Yoolka STEM: Dhamaan ardayda waxay baranayaan fahanka aasaasiga ah ee luuqada, waxayna fikir iyo maclumaad rasmi ah ka helayaan dhamaan maadooyinka lagu dhigto STEM k;, ardayda qalin jabinaysa oo leh aqoon buuxda oo maadooyinka STEM ka, shaqooyinka iyo qaababka lagu helo xirfadaha' ayna aqoonsadaan meelaha ay ka xiiseeyaan maadooyinka STEM ka.
Barashada kumbiyuutarka oo lagu barto fasal kasta; dhamaan ardayda Dearborn waxay bartaan kumbiyuutarka.
Manhaj kudhisan isla shaqayn, aasaaskiisu yahay xalinka caqabadaha jira, kuna dhisan shaqo xirfadaysan iyo mashruucyo.
Qorshaha Waxbarashada gaarka ah ee arday kasta.
Ardaydu waxay qalin jabiyaan ayagoo leh qorshe cad oo xirfadeed kaasoo ay ula gudbaan dookhyada mustaqbalkooda ee waxbarashada kuleejka/tababarka shaqada iyo xirfada ay doortaan.
Barashada iyo udiyaar garoowga kuleejka, oo ay ardayda garab taagan yihiin lataliyaal uheelan, booqashooyin ay ardaydu kutagayaan kuleejka, bandhigyada kuleejka, kulano ay laqaadanayaan ardayda kuleejka, iyo waxyaabo kale oo badan.
Shaqooyinka biloowga ah, barashada shaqada iyo fursadaha shaqada xiliga xagaaga ah ee ardayda dugsiga sare.
60 daqiiqo oo dheeraad ah waxna lagu baro caruurta maalin kasta, iyo laba saacadood oo marka dugsiga lagaso dareero kadib ah oo loogu talagalay taageero dhanka aqoonta ah iyo kobcinta ah in lagu siiyo ardayda kuwaasoo ubaahan ama doonaaya in la caawiyo.
Kubadda cagta ee Gabdhaha iyo Wiilasha Dugsiga Jeremiah Burke ee Ciyaarta Orodka iyo Garoonka.
BUILD Boston, Kooxda Robootyada, Kooxda Isdhaafsiga Caafimaadka, Helitaanka Cadaalada, naadiga Feerka.
Macalinka buuxa ee farshaxanka iyo macalinka buuxa ee muusiga.
SEI-Cape Verdean, SLIFE-Cape Verdean, ESL ta Waxbarashada Guud
Ardaydu waa inay xirtaan dharka dugsiga Dearborn STEM Academy ee Funaanada, shaarka ama funaanad dhaxameedka poloda ah.
Barashada Luuqada Ingiriiska - Cape Verdean
Ardayda leh Waxbarashada Xadidadan ama ay kakala Go'day waxbarashada Caadiga ah - Cape Verdean
26 oo kamid ah31
3305 oo kamid ah3923
65228 oo kamid ah75104
window.charts.studentDiversity.data = [66.70, 0.30, 28.00, 3.10, 0.60, 0.30, 1.10]
window.charts.teacherDiversity.data = [12.50, 1.00, 3.20, 1.00, , , 12.50]
Kubadda Kolleyga, Cheerleading, Kubadda cagta, Orodka gudaha, Orodka, Laliska